"ဒီရက်ကက်စုံစမ်းစစ်ဆေး: မူးယစ်ဆေးအသစ်တိုက်ဖျက်ရန်" ။ [နီကိုးလ်ပရပ်စ်၊ ဒန်နီယယ်ဘာဂေ့စ်နှင့်ဒေးဗစ်လေလေတို့ပါ ၀ င်လျက်ရှိသောတရား ၀ င်အရေးယူမှုများကြောင့် YBOP မှပြန်လည်ထုတ်လွှင့်သောအသရေဖျက်မှု၊
“ ရက်ကက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု - မူးယစ်ဆေးအသစ်ကိုတိုက်ထုတ်ခြင်း” [နီကိုးလ်ပရာ့စ်၊ ဒန်နီယယ်ဘာဂေ့စ်နှင့်ဒေးဗစ်လေယာတို့ပါ ၀ င်သောတရား ၀ င်အရေးယူမှုများကြောင့် YBOP မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ၊
အောက်ပါကော်ပီကိုကူးယူပြီး ၂၀၁၀ မတ်လ၊ မတ်လတွင်ကောလိပ်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ကမှားယွင်းသော၊ ၎င်းသည်“ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစာနယ်ဇင်းပညာ” အဖြစ်ဖုံးကွယ်ထားသည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်မှာ The Fight The New Drug နှင့် Gary Wilson ကိုသာပစ်မှတ်ထားသည်။ နားမလည်နိုင်သည့်အချက်မှာ၎င်းသည်လတ်တလောတစ်နှစ်နီးပါးတင်သွင်းခဲ့သောလော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာသည်အခြေအမြစ်မရှိသောဂယ်ရီ Wilson နှင့်ပတ်သက်သည့်အပိုင်းပါရှိသည်။ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် by နီကိုးလ် Prause (ဥပဒေ, ကမေတ္တာရပ်ခံသို့မဟုတ်ပါကအများပြည်သူရာ၌ခန့်ထားပြီနိုင်သူမှသာလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်) ။
အဆိုပါ Karley Betzler နှင့်မခင်မာ Stroozas ဆောင်းပါး ( "အဆိုပါဘောလုံးရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေး: သစ်မူးယစ်ဆေး "Fight) တက္ကသိုလ် Wisconsin ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူများတစ်ခုလုံးကိုဆောင်းပါးပယ်ဖျက်ဖို့ကျောင်းသားအယ်ဒီတာများအတင်းအဓမ္မနိုင်အောင်ကွာဟခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောဇာတ်လမ်းနှင့်ဂယ်ရီ Wilson ကများနှင့်တက္ကသိုလ် Wisconsin ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူများ / အဆိုပါဘောလုံးရိုက်အကြားအပေါငျးတို့သအီးမေးလ်များကိုအဘို့ဤကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ: တက္ကသိုလ် Wisconsin ပြည်နယ်၏ကျောင်းသားသတင်းစာ (The ဘောလုံးရိုက်) ကအပိုဒ်နီကိုးလ် Prause (မတ်လ, 2019) ကမှားယွင်းသောရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာရေးသား
YBOP သည်ဆောင်းပါးကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Wilson သည်ဆောင်းပါး၏ကျွမ်းကျင်သူ ၃ ဦး ဖြစ်သောနီကိုးလ်ပရပ်စ်၊ ဒေးဗစ်လိုင်နှင့်ဒန်နီယယ်ဘာ့ဂ်စ်တို့နှင့်တရားဥပဒေဆိုင်ရာအရေးယူမှုများပြုလုပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပညာရှင်မဟုတ်သူသုံး ဦး သည် Wilson နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ဤ link များသည်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အသရေဖျက်မှုနှင့် FTND နှင့် Wilson ကိုပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်သည့် Prause, Ley နှင့် Burgess တို့၏ကျယ်ပြန့်သောဥပမာများဖြစ်သည်။
Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com - Burgess မှပိုင်ဆိုင်သည်) မှပြုလုပ်သော Aggressive ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်ခြင်း
ဒါကြောင့် Betzler & Stroozas အဖွဲ့ဟာ Prause / Ley / Burgess tweets နဲ့ Facebook snark တို့နဲ့အတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်တာကိုအံ့သြစရာတော့မရှိပါဘူး။ ဒီ ၂၀၁၅ Daily Beast ဆောင်းပါးကနေနောက်ထပ် "Ex-Mormonism" မှကောက်ယူခဲ့သောဇာတ်ကြောင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သင်္ကေတအားလုံးက Betzler နှင့် Stroozas တို့သည် Prause / Ley / Burgess မည်သည့်ပရိဘောဂကိုမဆိုပေးအပ်သည့်အရာများကိုပြန်လည်ထူထောင်စေသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Prause, Ley နှင့် Burgess အားလုံးဒီဇိုင်းအနေနဲ့တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု / ကီထိုင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်သင်တန်းသားများကိုဖြစ်ကြ၏ YourBrainOnPorn.com ပိတ်ပစ်ရန်။ အသေးစိတျအဘို့ဤကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ: Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု။ အတိုချုပ်ပြောရရင်
နီကိုးလ် Prause နှင့်ဒါဝိဒ် Ley များမှာ key ကိုအဖွဲ့ဝင် “ RealYourBrainOnPorn” ၏မူပိုင်ခွင့် - ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သောဝက်ဘ်ဆိုက် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏အစီအစဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်.
Prause သည် RealYourBrainOnPorn ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစီမံခန့်ခွဲပြီး RealYBOP ၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲသည် - Twitter (https://twitter.com/BrainOnPorn), ယူကျု့ချန်နယ်, Facebook ကစာမျက်နှာ, reddit - အသုံးပြုသူ / sciencearousal.
Daniel Burgess သည်“ RealYourBrainOnPorn.com” ၏ URL ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
ဇန်နဝါရီလ 29, 2019, တွင် လိုလားတဲ့ porn ပါရဂူဘွဲ့နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးတင်သွင်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM ရရှိရန်။
Prause, Ley နှင့် Burgess တစ်ဦးကိုစေလွှတ်ခဲ့သည် မေလ ၁ ရက်၊။ ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်တွေကိုဆက်လက်။
အထက်ပါအပြင်, Prause ယခုအခါအတွက်အစပြုတာဖြစ်ပါတယ် အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု, Wilson က Prause ရဲ့အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲတင်သွင်းသူမျက်မြင်သက်သေ9ယောက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။
Nicole Prause နှင့် David Ley နှစ် ဦး စလုံးသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
ဒါဟာ UCLA (ဇန်နဝါရီ, 2015 န်းကျင်) Prause ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန်ကိုရွေးတော်မနှင့်သူမအစဉ်အဆက်ကတည်းကတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါတယ်။
UCLA မှထွက်ခွာပြီးနောက် Prause ဖြစ်လာခဲ့သည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။).
porn အဆိုတော်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူသူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးများမှာ ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်, ဖြစ်သကဲ့သို့ အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် Prause ရဲ့တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှု (FSC, AVN, XBIZ, xHamster, PornHub)။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, 2015 အတွက် အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း Prause အကူအညီများ offerred - သူမကလက်ခံပြီးချက်ချင်းစီမံခ 60 (porn အတွက်ကွန်ဒုံး) တိုက်ခိုက်ခဲ့.
ဒါဟာအစ Prause စေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ် porn အဆိုတော်ရယူကြ အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး), Prause ကျောင်းအုပ်ကြီးသုတေသီအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်အဘယ်မှာရှိ။ Prause ကသူမရဲ့လာမည့် Orgasmic တွေးတောဆင်ခြင်မှုလေ့လာမှု (FSC မှထောက်ပံ့ပေးထားသောဘာသာရပ်များနှင့်အတူ) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အများကြီးပိုစာရွက်စာတမ်းများအဘို့, ကိုကြည့်ပါ နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
ပိုများသောမကြာသေးမီကသူမတစ်ဦး (paid) "အဘို့အ-စီးပွားဖြစ်-ငှားရမ်း" သုတေသနပညာရှင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် Lovehoney ရဲ့ယုန် vibrators မြှင့်တင်။ ဆောင်းပါးကနေ "ဟု The သုတေသနဗြိတိသျှလိင်ကစားစရာအရောင်းဆိုင် Lovehoney အားဖြင့်မင်္ဂလာယုန် vibrators ၏သစ်တစ်ခုအကွာအဝေး၏ပစ်လွှတ်မှုအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ " ဒီအမြိုးသမီးမြားကွောငျ့, ၏ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည် vibrator ၏တူညီသောအမှတ်တံဆိပ် Is သူတို့ပူးပေါင်းလိင်စဉ်အတွင်းအလွယ်တကူ orgasm နိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချ?
အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဗြောင်ကျကျဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများတွင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley ဖြစ်ပါသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးက x-ဟမ်းစတားများကလျော်ကြေးငွေခံရ ၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြော်ငြာရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ အထူးသဖြင့် David Ley နှင့်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ရှိ တစ်ခုက x-ဟမ်းစတားက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပူးပေါင်း (Stripchat) ။ မြင် Stripchat သည်လိင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့်သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်သောညစ်ညမ်းသော ဦး နှောက်ကိုထိုးဖောက်နိုင်ရန် align လုပ်သည်။:
ထောငျခါစလိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်အခြားနှစ်ဦးကိုလည်းပါဝင်သည် RealYourBrainOnPorn.com "ကျွမ်းကျင်သူများက" (Justin Lehmiller & Chris Donaghue) ။ RealYBOP သည်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးလိုလားသူ pornကဦးဆောင်, Self-ဟစျကျွောကွ "ကျွမ်းကျင်သူများက" နီကိုးလ် Prause။ ဤသည်မှာလည်းလက်ရှိစေ့စပ်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင် တရားဝင် YBOP ဆီသို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ရိုးရှင်းစွာထားပါ YBOP နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတို့သည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူပျူငှါနွေးထွေးသောဖြစ်ကြသည်။ Ley နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သော Lehmiller နှင့် Donaghue တို့သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် porn နှင့် cam site များတွင်ပြproblemsနာမရှိကြောင်းသုံးစွဲသူများအားအာမခံသည်။
ဤရွေ့ကား (ကျွမ်းကျင်သူများ) Karley Betzler နှင့် Samantha Stroozas တို့သည် (ယခုဖိနှိပ်ထားသော) ဆောင်းပါးတွင် FTND နှင့် Gary Wilson အားရှုတ်ချဂုဏ်ဖျက်ရန်စုဆောင်းခဲ့သည် (သို့မဟုတ်အခြားနည်းတစ်လမ်းတည်းလော)
ဆောင်းပါး -“ ရက်ကက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု - မူးယစ်ဆေးအသစ်ကိုတိုက်ထုတ်ခြင်း”
Karley Betzler နှင့် ဆမ် Stroozas
မတ်လ 17, 2019
အောက်မှာ Filed ဟန်ပြ, အဆိုပါဘောလုံးရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေး
Kelsie Edson နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ
Wisconsin ပြည်နယ်-La Cross ပါမောက္ခဒေါက်တာအီဗန် Brody ဒေါက်တာရိုင်ယန်၏ 27 ညနေသုံးတက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံများအသင်း၏ခန်းမထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည် "babyish မှပဲပြောရမည်မှာသိကြ" မတ်လ6တွင် McKelley ဒေါက်တာကိတ်က Parker ဒီအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအတွက် featured လိမ့်မည်။ UWL ရဲ့အဖွဲ့ပြက္ခဒိန့်Tate ဒီဖြစ်ရပ်, ရန်မျှော်လင့်ကြောင်း "ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးအမျိုးအစားအဖြစ်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုပြင်းထန်စွာထင်နှင့်, လုံခြုံတုံ့ပြန်မှုများနှင့် Non-shaming ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပစ္စုပ္ပန်၏မေးခွန်းများကိုမေးရန်အဘို့အကာအာကာသသည်။ "
ဒီအဖြစ်အပျက် Nina Hartley ဖြစ်ရပ်သည်ကျဆုံးခြင်း 2018 စာသင်ရဲ့အဆုံးမှာကျောင်းဝင်းအပေါ်တင်ဆက်သူတစ်ဦးလိင်ပညာပေးနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တုံ့ပြန်တှငျကငျြးပခဲ့သဖြင့်, နယူးမူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပေါ်တွင်ကျင်းပခဲ့ anti-ညစ်ညမ်းအဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်အပျက်, လျက်ရှိသည် ဖေဖော်ဝါရီလ7။
McKelley လက်တွေ့နှင့်အကြံပေးခြင်းစိတ်ပညာအတွက် PhD နဲ့လိုင်စင်ရစိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ McKelley ကျန်းမာရေးစိတ်ပညာနှင့်ယောက်ျားနှင့် UWL မှာပုလ်အတွက်အထူးပြုသည်။ McKelley Fight သစ်မူးယစ်ဆေး, ဒါမှမဟုတ် FTND နှင့်နီနာ Hartley ၏နှစ်ခုသည်ယခင်ဖြစ်ရပ်များ၏ dichotomy အပေါ် commented သူတို့ UWL ထိခိုက်ဘယ်လောက်။ "ကြိုတင်ဖြစ်ရပ်များနှစ်ယောက်စလုံးအလွန်တိကျတဲ့စည်းကမ်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံး, အထူးအကျိုးစီးပွားကနေလာ," ဟုပြောသည် McKelley.
ဖေဖော်ဝါရီလ7တွင်, အဆိုပါဘောလုံးရိုက်, UWL ရဲ့ Cru ၏အခနျး (ယခင်ခရစ်တော်ကြောင့်ကျောင်းပရဝုဏ် Crusade ကိုအဖြစ်လူသိများ) နှင့် UWL ရဲ့ Equity နှင့်ကတိသစ္စာပြုလှုပ်ရှားမှုရုံးအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာနီကိုးလ်အနေဖြင့်အီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိ Prause.
Prause ချစ်ခင်ရပါသော Cru "ဟုရေးသားခဲ့သည်, As သငျသညျငါတင်ဆက်မှုများအတွက်နယူးမူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်ရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မြှင့်တင်မပေးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်အားအားပေး, လိင်ရုပ်ရှင်န်းကျင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်ဖိုးများကိုဖော်ပြဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။ "
Prause သူမသည် Los Angeles မြို့ရဲဌာနနှင့်အတူဆန့်ကျင်နေတဲ့ယောင်အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့သည့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူသူမ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားခဲ့သည်။ Prause ဒီတစ်ဦးချင်းစီ Fight သစ်မူးယစ်ဆေးရဲ့ (FTND) က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုကြောင်းရှင်းပြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီအပေါ် 21 ဆောင်းပါးများအတွက်ကိုးကားနေသည် FTND ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်.
ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause အားဖြင့်တင်သွင်းနောက်ယောင်ခံအစီရင်ခံစာ, Prause ကဘောလုံးရိုက်မှစေလွှတ်ခဲ့သည်။
နှင့်အင်တာဗျူးတွင် အဆိုပါဘောလုံးရိုက်, Prause "သစ်မူးယစ်ဆေးကသူ့ပစ္စည်းပစ္စယပို့စ်တင်စတင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲများတဲ့အခါမှာဒါ, ကိုယ့် floored ခဲ့ပါတယ်။ " ဟုပြောသည် Prause မည်သူမဆိုဒီပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့အမြင်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရဲ့ "ပြောပေမယ့်သိပ္ပံပညာရှင်များနောက်ယောင်ခံခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုမြှင့်တင်ကြဘူးပေါ်သွား၏။ လိုပဲတဲ့ဟာသတော့မဟုတ်ပါဘူး။ "
တစ်ဦးချင်းစီကိုပြောသည် အဆိုပါဘောလုံးရိုက် ဒီနောက်ယောင်ခံအစီရင်ခံစာမှားယွင်းသောခဲ့ကြောင်းအီးမေးလ်တစ်စောင်၌တည်၏။
နောက်ပိုင်းတွင် Cru ထံမှမည်သူမဆိုမှတုန့်ပြန်ခဲ့ကြပါလျှင်မေးမွနျးခံရပြီးနောက် Prause ရဲ့ အီးမေးလ်, Cru ဧရိယာဒါရိုက်တာလု Rickert ကျနော်တို့ကြောင်းတစ်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်ထင်ခဲ့ကြသည်မသိခဲ့ပါ "ဟုပြောသည်။ သူမသည်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးသို့မဟုတ် action ကိုမဆိုမျိုးကိုထုတ်ယူမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူမခဲ့သည့်အမြင်ခဲ့တူသောကျွန်မခံစားခဲ့ရပါတယ်။ " Prause သူမဖြစ်စေ UWL ရဲ့ Equity နှင့်ကတိသစ္စာပြုလှုပ်ရှားမှုရုံးကနေတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိမဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါရုံးမှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုချက်ကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ဤသည်ကိုအီးမေးလ် FTND အကြောင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုကြီးပြင်း: UWL ကျောင်းသားများကိုညစ်ညမ်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်အဖြစ်သူတို့ကိုအသုံးချသင့်သလော
ဒံယလေသ Burgess တစ်လိုင်စင်ရလက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့မိသားစုကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ Burgess ပထမဦးဆုံး 2010 အတွက်နယူးမူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ "[FTND] လာ. , ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းအသငျးတျောကထွက်နှင့်၎င်းတို့၏တင်ပြချက်ပေး, "Burgess ကဆိုသည်။
Burgess ကျော်ကရှင်းပြသည် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ သူကသူတို့တစ်တွေညစ်ညမ်းစွဲကြုံနေရခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်တဲ့သူ clients များနှင့်အတူတစ်ပုံစံသတိပြုမိသည်။ "ငါသည်ငါ့ထံသို့ရည်မှတ်သောလူပေါင်းသို့အနည်းငယ်ထပ်မံတူးဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါ relapse, တစ်ဦးတာဝန်ရှိဆရာအဖြစ်, ငါသို့ရေငုပ်ခဲ့၏အစစ်အမှန်အကြောင်းတရားများတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတွက်ဖို့ကြိုးစားနေဒီတော့သူတို့က, တွေ့ကြုံခဲ့ကြအောင်မြင်မှုမရှိခြင်း, အရာအားလုံးပြန်၏ကြင်နာဖို့ဦးဆောင် "Burgess, ပြောသွားလေ၏" သူတို့ Self-image နဲ့ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သောနှင့်နယူးမူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုသူတို့ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်တည်ဆောက်။ "
Burgess ကသူ့ဖောက်သည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်း "ဟုအနာဂတျမှာအလားအလာအဓမ္မပြုကျင့်ရန်နှင့်ညီမျှအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့။ " Burgess ပြီးတော့ "ဒီလူဦးရေရဲ့ကြီးမားတဲ့ span ဖြတ်ပြီးခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကြောင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဖောက်သည်မှအထီးကျန်ကြိုက်နှစ်သက်မခံခဲ့ရ, ရှင်းပြတယ် ဒီဘုံဆောင်ပုဒ်ပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်ဆင်တူခဲ့သမျှကိုမြင်လျှင်စတင် ဤအဖောက်သည် သူတို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
Burgess သူက New မူးယစ်ဆေးပြီးမြောက်ဖို့လိုခငျြ Fight ဘယ်သို့သောအားဖြင့်ရောထွေးခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ , Burgess "ကရှင်းပြသည်" ငါသည်? သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်င်ဘာသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်, သူတို့ရဲ့သတင်းစကားကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်ထင် "ဒါပေမယ့်သတင်းစကား Blend နဲ့မှုန်ဝါးဖြစ်ပြီး, သငျသညျ porn ကြည့်ရှုအားပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှသင်တဦးတည်းဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုရပါလိမ့်မယ်နှင့်သင်စဉ်းစားနေ သငျသညျ Ted Bundy ဖြစ်လာဤလမ်းကြောင်းကိုပေါ်မှာဆိုရင်။ "
FTND ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် တကျိပ်တပါးသောဆောင်းပါးများ ကြောင်း Ted Bundy ဖော်ပြထားခြင်း။ ဒီဆောင်းပါးတွေညစ်ညမ်းနှင့်အမှတ်စဉ်လူသတ်သမားအကြားဖြစ်နိုင်သော link ကိုဆွေးနွေးပါ။ အဆိုပါပြစ်မှုထင်ရှားလူသတ်နှင့်သူ၏ porn အသုံးပြုမှုအကြားဆက်စပ်မှု၏ခေါင်းစဉ်တွင်, ဆောင်းပါးတွေထဲကတစ်ခု "ဖတ်ကျနော်တို့သာညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းအပြုအမူအကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွန်နက်ရှင်အကြောင်းကိုသိသောအရာကိုမျှဝေနေပါသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကောက်စေရန်သင့်အားစွန့်ခွာလိမ့်မယ်။ "
McKelly အမေရိကန်လူဦးရေ၏အမှတ်စဉ်လူသတ်သမားစိတ်ဝင်စားတယ်ကြောင့်ဒီအထူးသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနည်းဗျူဟာအဖြစ်အသုံးပြုကြောင်းယုံကြည်သည်။ McKelly entrainment နှင့်သတင်းမီဒီယာများ၏အများကြီးထက်မကွဲပြားသော [FTND ဖြစ်ပါသည်] "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့အခြားသူတွေအကြားထွက်ရပ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုထွက်ရှာတဲ့ဘက်လိုက်မှုရှိသည်။ "
McKelley "Ted Bundy ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဇာတ်လမ်းကြီးကဖမ်းဆုပ်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, အဲဒီရှေးရှေး Ted Bundy ရဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမဆိုနောက်ခံဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည်ယုံကြည်ကြဘူး, ဒါကြောင့်လုပ်မယ့်ခက်ခဲအငြင်းအခုံကပြောပါတယ်။ Ted Bundy ၏အငြင်းအခုံသာလူတွေစိတ်ဝင်စားရဖို့ပါပဲ။ "
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပေါ်ကြီးပြင်း ဖြစ်စေ ညစ်ညမ်းအခြားသူများကိုဦးတည်ယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုတိုးပွားစေပါသည်။ McKelly သုတေသနဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်ဒီအဖြေသည်။ "ဒါဟာ [porn] အထူးသအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီး, အခြားသူများအားယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ပါသလား များစွာသောလူကိုမေးမေးခွန်းတစ်ခု။ ကြှနျုပျတို့သညျ "တစ်ဦးတစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုအတွက်ဒါပေမယ့်မလိုအပ်တဲ့သဘာဝ setting ကိုမှာပြထားတဲ့ကိုထိခိုက်ရှိကွောငျးအကြံပြုလေ့လာမှုအချို့ မှလွဲ. အခြားမသိရပါဘူး
"ဒါဟာ porn ယာယီမုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီနှင့် misogynistic စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ယောက်ျားရဲ့အမြင်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အခြားအလေ့လာမှုများသူတွေကိုအထူးသဖြင့်လူတို့သညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုကြူးများအတွက်အန္တရာယ်မှာပြီးသားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးခန့်မှန်းပြီးတော့သူတို့လည်းညစ်ညမ်းမှတဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွထုတ်ရှာကြံခံရဖို့ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိသောသူတို့ကိုနဲ့အခြားအန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ပါတယ် "ဟုဆိုပါတယ် McKelley.
ဘတ်ဂျက်အဆိုပြုချက်ကျောင်းဝင်းမှ FTND ရောက်စေဖို့ 2018 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ Rickert Nina Hartley UWL, အဓိပတိဂျိုးဆီသို့ရောက် လာ. , ပြီးနောက်ရှင်းပြတယ် Gow ကျောင်းဝင်းမှ FTND ဆောင်ခဲ့အပေါ်စီစဉ်ပေမယ့်ကျောင်းသားကအစိုးရနှင့်အဓိပတိရဲ့ရုံးအကြားလိုအပ်ဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့ပါသည်။
ဒုက္ခ FTND ထံမှခရီးစဉ်ဆွေးနွေးရန်ဆန္ဒရှိ UWL ကျောင်းသားများကိုရောက်ရှိရှိခြင်းပြီးနောက်, အဆိုပါဘောလုံးရိုက် သူတို့ရဲ့အမွငျဆှေးနှေးဖို့တစ်ပလက်ဖောင်းလိုသူ Cru ၏ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အမည်မသိအစွန်အဖျားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျောင်းသားအမည်မသိဆက်လက်တည်ရှိဖို့တောင်း; သူတို့အဖြစ်ရည်ညွှန်းပါလိမ့်မည် အာဒံကို။ *
အာဒံရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေနှင့်အတူ FTND ဖြစ်ရပ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်အနှစ်ချုပ်မှမေးသောအခါသူကရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒါဟာအတွင်းများ၏ကြင်နာခဲ့ "ဟုပြောသည်။ ငါကမှတက်ခဲထိုကဲ့သို့သောကြီးတွေသဘောတူညီချက်နဲ့တူခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်ကသူတို့ကိုရှိလိုသူပြည်သူများနှင့်တူကြ၏သူတွေကိုကဲ့သို့ Polarized တွေအများကြီးနဲ့တူရှိခဲ့သည် '' အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကဒီမှာရှိပါသလဲ " '
အာဒံအဒါ "ပြောသွားပါကအလွန် Polarized ကမှတက်ဦးဆောင်လူတိုင်းအကြောင်းကိုပြောဆိုသောဒီကြီးမားတဲ့အရာကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လိုပဲကခံစားရတယ်။ ပြီးတော့သူကဖြစ်ပျက်ပြီးတော့သူကပဲဖြစ်ပျက်များနှင့်ဘာမျှမပုရစ်ကဲ့သို့နောက်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ "
McKelley တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသောငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် FTND အရာ၎င်းတို့၏ထုပ်ပိုးအတွက်ကျွမ်းကျင်နည်းဗျူဟာခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကသုတေသနနှင့်လေ့လာမှုများသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်မြေတပြင်လုံးရုပ်ပုံဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ် "ဟုပြောခဲ့သည်။ သူတို့တဦးတည်း variable ကိုဆွဲထုတ်ပါကသုတေသန၏အနက်ကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ "
ကျောင်းသားတစ်ဦးဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်သက်တူရွယ်တူကနျြးမာရေးထောက်ခံသူနှင့်အတူအီးမေးလ်တစ်စောင်အင်တာဗျူး, Sadie အတွက် Szabelskiကျောင်းဝင်းတခုတခုအပေါ်မှာလှုပ်ရှားသူအဖြစ် FTND နှင့်သူမ၏အမွငျမြားတကျရောကျနေချိန်မှာသူမကသူမ၏အတွေ့အကြုံကိုပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Szabelski အဆိုပါတင်ပြချက်ထဲကလာ ", လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတစ်ခုဘက်မလိုက်ရှုထောင့်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဖြစ်ရပ်တက်ရောက်ခဲ့သည်သို့သော်သူမလက်ခံရရှိဘယ်အရာကိုမဟုတ်ခဲ့တူသောသူမခံစားခဲ့ရတယ်, ငါသည်ငါ့ရွယ်တူ၏ကြွင်းတင်ဆက်မှုအနက်ဘယ်လောက်များအတွက်လျော့နည်းငါမျှော်လင့်ခြင်းထက်အသိပေးထားသောနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်သလိုခံစားရတယ်။ "
အဆိုပါတင်ပြချက်တစ်လျှောက်လုံး Szabelski ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုရွေးချယ်မှုပတျဝနျးကငျြကစကားဝိုင်းချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ Szabelski အခွားသူမြားစှာရှိပါတယျမိမိတို့စွဲလမ်းစေတယ်သောသူတို့ကကျော်ညစ်ညမ်းလောင်ဖို့ရှေးခယျြမှုအောင်တချို့လူတွေရှိပါတယ်ဖြေရှင်းရန်လစျြလြူရှု "ဟုပြောသည်ပေမယ် သူကိုဖြည့်ညှင်းအတွက်အသုံးပြုရန်နှင့်ဤတူညီသောအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရင်ဆိုင်ရပါဘူး။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့်အစွန်းရောက်ဘာသာစကား၏အသုံးပြုမှု [Porn မတ်ေတာသသေ] အရှက်ကွဲခြင်းကိုသူတို့အနေနဲ့စွဲလမ်းသို့မဟုတ်မရှိပါကမသက်ဆိုင်ညစ်ညမ်းလောင်သောသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးချင်းစီ။ "
Szabelski FTND လူအစုအဝေးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသွေးဆောင်နှင့်အခြားဘေးဖယ်အထောက်အထားတွေကို tokenize နိုင်ရန်အတွက်အဓိကအားဖြင့်လွှမ်းမိုးအထောက်အထားတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဒီကတဆင့်, Szabelski တက်ရောက်သူလူအားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးကို porn စားသုံးသူကိုကိုယ်စားပြုမပြုခဲ့ကြောင်းသို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်သတိပြုမိသည်။
"သူတို့ကညစ်ညမ်းစွဲသူတို့ရဲ့အဓိကသာဓကအဖြစ် heteronormative ဆက်ဆံရေးနှင့်ယောက်ျားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းမျှော်လင့်အဖြစ်ပရိသတ်ကိုပိုမိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်, "ဟုပြောသည် Szabelski.
Szabelski သူမကထိုအဖြစ်အပျက်မှာတင်ဆက်ပါဝါပြောင်းလဲနေသောနေဖြင့်စိတ်ပျက်အားလျော့ခဲ့ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါသက်တူရွယ်တူကနျြးမာရေးထောက်ခံသူအဆိုပါဖော်ပြထား လူတို့သညျ, "ခဲ့ကြသည် သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုလွတ်မြောက်စေပြီးလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခြင်းအဖြစ်သရုပ်ဖော်ခဲ့ပြီးတစ် ဦး တည်းသောစကားပြောတတ်တဲ့မိန်းမကရှက်တတ်ပြီးတွန့်ဆုတ်နေတယ်။ ဟောပြောသူကအမျိုးသမီးဇာတ်လမ်း၏ဗီဒီယိုကိုပင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်မှာသူမ၏လုပ်ရပ်သည်သူမအတွက်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းနှင့်သူမအားသူမပုံပြင်မကြားမီလက်ခုပ်သြဘာပေးခဲ့သည်။  Szabelski သူတို့ကယောက်ျားရဲ့ပုံပြင်များစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စပီကာချီးကျူးဖို့ပရိသတ်ကိုမမေးခဲ့ဘူးကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
"ထိုနည်းတူစွာ၎င်းတို့သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း၏သူမ၏အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်စားစကားပြောဖို့ခဲ့တစ်ကြိမ်အရောင်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကတော့တင်ဆက်မှုကာလအတွင်းပစ္စုပ္ပန်ကြီးကိုပထမဦးဆုံးနှင့်သာအချိန်ကုန်ခဲ့," ဟုပြောသည် Szabelski.
FTND ရဲ့ကြော်ငြာနဲ့ content တာနှင့်အတူ resonated Szabelski သူမထူထောင်ခဲ့သည့်လူမျိုးရေး Token သတိပြုမိသည်။ "တစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်, ငါချက်ချင်းလူမျိုးရေး Token သတိပြုမိသည်။ ဒါဟာအားလုံးပါဝင်နိုင်ထင်ရမယ့်နောက်ဆုံးမိနစ်နည်းဗျူဟာများကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရ; သို့သော်အဖွဲ့အစည်းညစ်ညမ်း၏ဖြစ်ခြင်းစားသုံးသူကဲ့သို့ဖြူအမျိုးသမီးတွေဖယ်ထုတ်လိုက်နှင့်အမျိုးသမီး-of အရောင်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာအမြင်တင်လိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောအုပ်စုတစ်စုရဲ့အထောက်အထားတွေကို၏သဘောထားအမြင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုမထိခိုက်စေ, "ဟုပြောသည် Szabelski.
ဒေါက်တာ, ဒါဝိဒ်သည် Ley လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများလေ့လာနေသူဆုရစာရေးဆရာနဲ့လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကရှင်းပြ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် တစ်ခုကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ထုံးစံ၌ porn ကို အသုံးပြု. အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူ Pre-တည်ဆဲစိတ်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပေမည်။ "ဒီရှေးရှေး၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူရုန်းကန်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအသုံးပြုနေသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းအဖြစ်, "Ley ကဆိုသည်။
အဆိုပါဘောလုံးရိုက် ထို့အပြင်အကြံပေးခြင်းထွက်ရောက်ရှိခဲ့သည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ '' ဒေါက်တာအဲလစ်ဇဘက် Mullen-Houser စမ်းသပ်။ Mullen-Houser UWL ၏ဆုံးမစကားနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းရေးစင်တာမှတဆင့်ထုတ်ကန်ထရိုက်သူတစ်ဦးလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Mullen Houser က Pre-ရှိပြီးသားစိတ်ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဟာပြဿနာထုံးစံ၌ porn ကိုအသုံးပြုပြီးပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်သမျှကပြောပါတယ်။
Burgess ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ် Pre-ရှိပြီးသားစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို, သောစိတ်ကူးဖော်ပြခဲ့တဲ့, နောက်ခံပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်။ Burgess porn အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့စိတ်ရောဂါ၏လက္ခဏာပြီးနောက်မယ့်အစားအမှန်တကယ်နာမကျန်း addressing စေခြင်းငှါစိတ်ကူးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ Burgess ကလည်း, "အဲဒီမှာဖွင့် များသောအားဖြင့်ကြောင်းအပြုအမူကားမောင်းရဲ့ Pre-ရှိပြီးသားအမှုအရာများနှင့်ကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်, ထို့နောက် client ကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ "
Prause ထို့အပြင်စိတ်ကျရောဂါ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်. 15% အတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူမြင့်မားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သူကပြောပါတယ်။ "လူတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ခံစားရစေရန်ကြိုးစားနေကြတယ်" ဟုအဆိုပါအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကဆိုသည်။
Prause ထို့နောက်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ obsessive compulsive ရောဂါရှိတယ် "ဟုပြောလေ၏။ ဒါက 50 နှစ်ပေါင်းတည်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာညစ်ညမ်းနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒိုမိန်းအတွက်တငျပွခံရဖို့ဖြစ်ပျက်ကြောင်းအထွေထွေ OCD ရှိသည်။ "
FTND သူတို့ non-ဘာသာရေးအဖှဲ့အစညျးဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့၏ website တွင်ဖော်ပြသည်။ သူတို့ UWL မှရောက်လာသောအခါသူတို့ Cru, ကျောင်းဝင်းအပေါ်တစ်ဦးဘာသာရေးအဖှဲ့အစညျး၏ UWL ရဲ့အခနျးတှငျကကမကထပြုခံခဲ့ရသည်။
Cru နှင့်အတူအကျိုးစီးပွားကိစ္စရပ်များကိုမဆိုပဋိပက္ခ, တစ်ဦးဘာသာရေးအဖှဲ့အစညျး, sponsor ရှိခဲ့ပါလျှင်မေးတဲ့အခါ FTND, Cru ဧရိယာဒါရိုက်တာ Rickert အစပိုင်းတွင်မေးခွန်းကိုနားမလည်ခဲ့ပေ။ ထို့နောက်သူ, ကိုထည့်သွင်းဖို့သွား "ကျွန်မကျောင်းသားအုပ်စုများစပီကာအတွက်အချိန်အားလုံးဆောင်ကြဉ်းထင်, ငါတို့ကျောင်းသားအုပ်စုတစုကလူ့ဂုဏ်သိက္ခာဂရုစိုကျတူသောငါခံစားရတယ်, ငါ FTND ညစ်ညမ်းအကြောင်းပြောဆိုရန်အတွက်ယူဆောင်လာရန်အကြီးအပီခဲ့တာလို့ထင်ပါတယ်။ "
FTND ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ခုနစ်ခုတစ်ဦးချင်းစီ၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သူတို့ထဲကသုံးယောက်ဟာသူတို့ရဲ့အခွန်အညီ 2017 အတွက် FTND နေဖြင့်လျော်ကြေးပေးခဲ့သည်: ရွှံ့စေး Olson, Jason ကာရိုးနှင့် Natale McAneney. ကာရိုးဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်ကပါမောက္ခအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်။ ကျောင်းရဲ့မစ်ရှင်ကြေညာချက် "ထောက်ခံ, တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်အဆုံးစွန်သောနေ့သူတော်စင်သားယရှေုခရစျ၏ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်လမ်းပြတော်မူ၏။ " ဖတ်ကာရိုး FTND အားဖြင့် $ 16,350 လျော်ကြေးငွေပေးခဲ့သည်။
ဂျေဆန်ကာရိုး, BYU မှာ FTND နှင့်ပါမောက္ခ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဦး Fortify app ကိုတခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူထောက်ပြသည်။
FTND အခွန်ဒီဇင်ဘာလ 990, ProPublica.org ၏ Form ကို 2017
Olson ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံဆန့်ကျင် Utah ညွန့်ပေါင်းအဘို့လက်ရှိဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအဖှဲ့အစညျး၏ LinkedIn တို့ UCAP ဆုံးသောသိက္ခာဂျော့ခ်ျအိပ်ချ် Niederauer သည် Utah ကက်သလစ် Dioceses ဟောင်းဆရာတော်နှင့်စတီဗင်ဃ၏ညှနျကွားမှုအောကျတှငျ 2000 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး "ဖတ် Kohlertအဆုံးစွန်သောနေ့သူတော်စင်သားယရှေုခရစျ၏ဘုရားကျောင်းအဘို့ယခင်ပြည်သူ့ရေးရာဥက္ကဋ္ဌ။ "
McKelly အစပိုင်းတွင် FTND ဖြစ်ရပ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသောမိမိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှတုံ့ပြန်ချက်ကြားနာပြီးနောက်ဘာသာရေးအဖှဲ့အစညျးဖွစျဖို့ယုံကြည်သည်။ သင်နှင့်သင့်အဘို့အကြောင်း FTND နဲ့တူအုပ်စုများအတွက် "တစ်ဦးကစိန်ခေါ်မှု porn မကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်ကောင်းသောလျှင်, ငါကပြောပါတယ်သူတစ်ဦးနှင့်အတူငြင်းခုန်ဖို့မသွားနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် 'ငါ့ဘာသာရေးပညတ်တို့ကိုကျင့်သို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်ဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်ဦးကမှားအရာသည်ငါ့အကိုပြောပြ,' ဘာသာရေး, "ဟု McKelley
FTND FTND ပံ့ပိုးကူညီ Cru ဖြစ်ရပ်လုပ်ပါလျှင်, အာဒံကိုမေးမြန်းသောအခါသူတို့၏ပလက်ဖောင်း non-ဘာသာရေးအပြောအဆိုအာရုံစိုက်ကြောင်းစောဒကတက်သည်ဘာသာရေးတီးတိုးရှိနေစဉ်, သူကပြောသည်, "အင်းဟုတ်ပါတယ်ငါကလုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ "
Fortify ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် အိုင်စီတီ ဝက်ဘ်ဆိုက်အား“ သိပ္ပံနည်းကျအခြေပြုပံ့ပိုးမှု” အနေနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကိုကူညီရာတွင်“ ကောင်းသောအရာအတွက်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုရှောင်ရှားပါ။ ” ဝက်ဘ်ဆိုက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တံဆိပ်များကိုရနိုင်ပြီးသုံးစွဲသူများသည်“ ကျွမ်းကျင်သူများထံမှတိုက်ရိုက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု” ကိုရရှိနိုင်သည်။ Fortify သည် FTND ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်ဂျေဆန်ကာရိုးအား၎င်းတို့၏ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်သူများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြသည်။
Fight နယူးမူးယစ်ဆေးအလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Natale နှင့်အတူကောက်ယူအီးမေးလ်တစ်စောင်အင်တာဗျူးတွင် McAneney, McAneney "[Fortify] ယခုလွတ်လပ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ " ဟုပြောသည်သို့သော်အပေါ် ရွှံ့ Olson ရဲ့ LinkedIn တို့အကောင့်သူနေဆဲ၏ '' တည်ထောင်သူ / CEO ဖြစ်သူ '' အဖြစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် ပြုပြင်လိုသော FTND ၏အဖြစ် '' ပူးတွဲတည်ထောင်သူ '' ။ Olson လက်ရှိသူတို့အားအခန်းကဏ္ဍအတွက် Fortify နှင့် FTND နှစ်ဦးစလုံးမှာအလုပ်လုပ်အဖြစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
Fortify program တစ်ခု FTND နှင့်သစ်ခေါက်မှတဆင့်လူငယ်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းများအတွက်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာတခုသို့ပွေးလေ၏သောလမ်းအဖွဲ့နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းရေးအဖွဲ့တွင်ဖော်ပြထားသည် 47 ပစ္စည်းများ နှင့်သစ်ခေါက်တှငျဖျောပွထားခြင်းဖြစ်သည် လေးဆောင်းပါးများ FTND ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။
Fortify တှငျဖျောပွထားခြင်းဖြစ်သည် 125 ပစ္စည်းများ FTND ရဲ့ website တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Fortify အပြင်, Olson ဖြစ်ပါသည် LinkedIn တို့အပေါ်အဖြစ်စာရင်း နှစ်ခုဏနေသူများကဖန်တီးသောကုမ္ပဏီ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူအသုံးပြု ther အစီအစဉ်များ "အပြုအမူပြောင်းလဲမှုကို software ကို": မသည် စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတှကျအသုံးပွုသောနှင့် အလှည့် အရာပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အားလုံးသုံးဝဘ်ဆိုဒ်များ, Fortify, ဓာတ်လှေကားနှင့်ပြန်လာများအတွက်တူညီစာရင်းဇယားဝါကြွားခြင်း အသုံးပြုသူရဲ့ အောင်မြင်မှု, တဦးတည်းကွာခြားချက်ရှိပေမယ့်။
Fortify ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ“ ၉၀% ကျော်က Fortify သည်သူတို့ကိုရေရှည်ပြောင်းလဲမှုဆီသို့ ဦး တည်စေခဲ့သည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Turn နှင့် Lift ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုလုံးက“ ၉၀% သောလူ ဦး ရေကကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းများကသူတို့ကိုရေရှည်ပြောင်းလဲမှုဆီသို့ ဦး တည်စေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်” ဟုဆိုသည်။
ဒါဟာကွေ့နှင့်ဓာတ်လှေကားဟာမရေ၏အသွင်အောက်တွင် Fortify ထံမှစာရင်းဇယား hosting ဖြစ်ကြောင်းပေါ်လာသော စကားများ "ပလက်ဖောင်း" သို့မဟုတ် "ကျနော်တို့ကကူညီတစ်ဦးချင်းစီ။ "
Fortify တွင်, ဝက်ဘ်ဆိုက်ကပြောပါတယ်, "Fortify အသုံးပြုသူများကစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက် 85% လျော့နည်းသွားသတင်းပို့ပါ။ " သို့သော် ပြန်လာအပေါ်၎င်းတို့၏စာရင်းဇယား "ကျနော်တို့စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက် 85% လျော့နည်းသွားသတင်းပို့ကူညီပုဂ္ဂိုလ်များ။ " ဟုပြော
Fortify ရဲ့ website ကပြောပါတယ်, "အသုံးပြုသူများ porn အသုံးပြုမှုအတွက် 88% လျှော့ချရေးသတင်းပို့ပါ။ " ထို့နောက်ပြန်လာပေါ်ကသူတို့ရဲ့ website သို့ပြောပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. ပုဂ္ဂိုလ်များစွဲလမ်း / compulsive အပြုအမူတစ်ခု 88% လျော့နည်းသွားသတင်းပို့ပါ။ "
သူက New မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်သို့မဟုတ်သူ၏ဖောက်သည် Fortify သုံးပြီးအကြံပေးလိုလျှင်မေးသောအခါ Burgess ငါမနိုင်နှင့်အပြင်, ငါသူတို့မျိုးရှိကြောင်းကိုခြုံငုံဆောင်ပုဒ်ကိုထောကျပံ့ဖို့စဉ်းစား, သူတို့ကချယ်ရီ-ရွေးကိုးကား "ဟုပြောသည် သုတေသနကနေသူတို့စကားစပ်ထဲကယူပါတယ်။ "
ဟုမေးသောအခါ Fight လျှင်နယူးမူးယစ်ဆေး, ချယ်ရီ-ကောက်နေဒေတာများတွင်ပါဝင်နေ FTND အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Natale McAneney ကျနော်တို့ကအထူးသဖြင့်သိပ္ပံ, အချက်အလက်များနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ "ဟုပြောသည် ပျက်ဆီး။ **"
Ley 'ကိုဆင်းထိုင်နေနှင့်သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများကိုစဉ်းစားရန်ကျောင်းသားများကိုအားပေးတယ်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသည်အဘယ်သို့ လိင် နှင့်သင်မည်သို့သူတို့အားစိတ်ကူးများထဲကနေလာခဲ့ကြရာကြောင်းလေ့လာသင်ယူခဲ့တာလဲ "
ကျောင်းသားများဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုမေးခွန်းထုတ်ရပါမယ်နှင့်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Mullen-Houser ကဆိုသည်။ "ငါသည်သူတို့၏ဘဝညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ထိခိုက်ခံရလျှင်အရာအားလုံးထက်နှင့်ဝသကဲ့သို့, ကျောင်းသားများရပ်တန့်ခြင်းနှင့်စဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။
FTND ရဲ့ဖြစ်ရပ်မတိုင်မီကအာဒံ Cru စာနယ်ဇင်းသမားများအားဟောပြောဖို့နဲ့ Cru န်ထမ်းများသူတို့ကိုပေးပို့ဖို့မအဖွဲ့ဝင်များကသတိပေးပြောခဲ့သည်။ "သင်မည်သူမဆိုချဉ်းကပ်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောခဲ့မတိုင်မီရုံအရာကသူတို့ကိုငါ့အလမ်းနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယပေးပို့ရှိ၏," အာဒံကဆိုသည်။
"သူတို့ကသတင်းထောက်တွေကိုအကြောင်းကိုပြောသည်?" Betzler မေးတယ်။
"ဒါကြောင့်အထူးသခဲ့ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် သို့မဟုတ်ခဲ့ it ဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေသတင်းထောက်တွေကို? "Betzler ဟုမေး
အင်တာဗျူးမှာတော့ Rickert တစ်ဦးအတွက် Cru ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်သူ၏ခံစားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို ယခင်ဆောင်းပါး ထို အဆိုပါဘောလုံးရိုက် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ကနည်းနည်း pigeonholed ခဲ့ကြသည်တူသောကျောင်းဝင်းအပေါ်ယုံကြည်ခြင်း-based အုပ်စုတစ်စုဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်မခံစားရ အဆိုပါဘောလုံးရိုက်။ သငျသညျပုံပြုပါကြောင်းကိုသင်၏ '' Non-တဖက်သတ်သုတေသန '' နှင့်အတူ။ ဘယ်ငါသည်သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးနှင့်တူခံစား ရန်နှငျ့ ပတျသကျ. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါး, ငါသည်ကြိုတင်ထုတ်ဝေဖို့ရန်ပြောဆိုသောမခံခဲ့ရပါဘူး။ "
ဒါကြောင့်သင်ကမျြးစာလာသခဲ့ကြောင်းယခင်ဆောင်းပါးအပေါ်အခြေခံပြီးသင်၏နောက်ဆောင်းပါးအတွက်တဖက်သတ်အမြင်, ရှိသည်မဟုတ်ရန်အဘို့အခက်ခဲဖြစ်သွားတူသော "ကျွန်မခံစားရတယ်။ yeah ဒါရုံဖျော my အဲဒီမှာအမြင် ... "Rickert ယခင်ဇာတ်လမ်း၏ 'အမြင်' 'အမျိုးအစားတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
မိမိအဘို့တောင်းလျှောက်သည့်အခါ သဘော အဆိုပါ FTND တင်ဆက်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ဆောင်ပုဒ်များ, အာဒံငါတွေ့နိုင်ပါသည်, သူတို့သည်ပညာပေးရန်ကြိုးစားနေတူသောဒါဟာပုံရသည် "ဟုပြောသည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့သွားရကြသည်" Porn, မတ်ေတာသသေ "ရန် ing ထိုနောက်ပြုပါ? "
"ပြီးတော့လည်း, ငါသည်သက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်ရည်ရွယ်ချက်၏မြေတပြင်လုံးခေါင်းစဉ်ငါသူတို့တကယ်နဲ့အတူရုန်းကန်နေထင်တစ်ခုခုနှင့်တူ၏လိုပဲထင်ပါတယ်။ တူကို T-ရှပ်အင်္ကျီကြောင်းရောင်းချနေ ဆိုသညျကား, ပြောမယ့်အကြီးစားအရာရဲ့ '' Porn မေတ္တာတော်, သေ ' "အာဒံကဆိုသည်။
အဆိုပါ Cru အဖွဲ့ဝင်ပြောသွားလေ၏ "ပြီးတော့သင်သည်မည်သည့်နောက်ခံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်လိုပဲသို့သော်သင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်နှင့်တူတစ်ခုခုတွေ့ကြုံနေလျှင်တူတော်တော်လေး shaming ရဲ့ဝတ်ထားကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်, ငါသည်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်အကူအညီနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ပညာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပေမယ့်အလွန်ကြမ်းတမ်းနှင့်တူသောအလွန်လက်မခံနိုင်ကဲ့သို့ဖြတ်ပြီးလာမယ့်ပါတယ်။ "
Burgess FTND ဆှေးနှေး သို့ သူတို့အဖွဲ့အစည်းကတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်။ Burgess ငါဝင်သောအခါငါသိ၏နှင့်ရွှံ့စေးမြင်သူသည်ငါနှင့်အတူသဘောတူရဲ့, ငါ့အဖြစ်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းသူလုံးဝတူညီစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖွင့် "ဟုပြောသည် '' ဟုတ်ကဲ့ကြှနျုပျတို့သညျဤသတင်းစကားကိုပြောင်းလဲပစ်တယ်, '' ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ 'ကတိုးတက်စေရန်တယ် သူကတင်ပြချက်များသွားသည့်အခါထိုအခါမူကား, သူကကုန်ပစ္စည်းရောင်းပါတယ်။ "
Burgess ထို့နောက်သူတို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ငါတို့သည်မေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ "
* အာဒံကိုဤအရင်းအမြစ်ရဲ့အမည်ရင်းမဟုတ်ပါ။ ''
** စာလုံးစောငျးထားသဖြင့်ထည့်သွင်းမပေး အဆိုပါဘောလုံးရိုက်